विश्व कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको बेला हाम्रो मुलुक पनि कोरोना संक्रमणसँग जुधिरहेको छ । जनमानसमा यो महामारीको धेरै ठूलो त्रास छ । आफ्नो सुरक्षाका लागि सबैजना यति बेला आफ्नो घरमै बन्द भएका छन् । अत्यावश्यक बाहेक अन्य बाहिर आवत जावत पूर्णरुपले बन्द छ ।कोरोनासँग लड्नका लागि यो नै बलियो अस्त्र हो ।
एकपटक पेट बढेपछि त्यसलाई घटाउन निकै गाह्रो हुन्छ । तर यो असम्भव भने होइन ।
यसका लागि तपाईंले आफ्नो खानामा केही परिवर्तन ल्याउनुका साथै हल्का व्यायाम पनि गर्नुपर्छ ।
१. मनतातो पानी पिउनुहोस्ः
दिनभरी कम्तीमा पनि ३ देखि ४ ग्लास मनतातो पानी पिउनुहोस् । यसले तपाईंको पेटको बोसोलाई निकै छिटो पगाल्ने गर्दछ ।
२. बदाम (एल्मोन्ड):
दैनिक ४ देखि ५ वटा बदाम खानुहोस् । यसमा पाइने भिटामिन इ, पोलिस्याचुरेटेड र मोनोस्याचुरेटेड फ्याटले भोक नियन्त्रण गर्दछ । यसले पेटको बोसो कम गर्नमा सहयोग गर्दछ
३. सौफ मिसिएको पानीः
एक कप पानीमा एक चम्चा सौफ हालेर त्यसलाई उमालेर नियमित रुपमा पिउनुहोस् । यसले तपाईंको पाचन प्रक्रियालाई सुधार्छ भने तपाईंको पेटको बोसोलाई पनि कम गर्दछ ।
दैनिक रुपमा एक कचौरा दही खानुहोस् । यसमा पाइने क्याल्सियमले पेटको बोसो बढाउने कार्टिसोल हर्मोनको लेभललाई कन्ट्रोल गरेर पेट घटाउन मद्दत गर्नेछ ।
५. हरियो सागसब्जीः
खानामा पालुङ्गो, मेथी र बन्दाजस्ता हरियो तरकारी समावेश गर्नुहोस् । यसमा प्रचुर मात्रामा फाइबर पाइने भएका कारण पेटको बोसो घटाउनमा सहयोग पुर्याउँछ ।
बिहान प्रोटिनयुक्त ब्रेकफास्ट खानुहोस् । यसमा अन्डा, दुध, केरा र फलफुलजस्ता स्वस्थकर खानेकुरा समावेश गर्नुहोस् । यसले दिनमा पटक पटक भोक लाग्ने समस्याबाट छुटकारा दिन्छ ।
७. खाना खाँदा पानी नपिउनुहोस्ः
खाना खाने बेलामा पानी नपिउनुहोस् । यसले खाना ठिक तरिकाले डाइजेस्ट हुन दिँदैन जसका कारण बोसो बढ्न थाल्छ खाना खाएको १० वा १५ मिनेट पछि मात्र पानी पिउनुहोस् ।
८. एकैपटक नखानुहोस्ः
खाना खाँदा एकैपटक नखानुहोस् । आफ्नो खानालाई २ वा ३ घण्टाको ग्यापमा खानुहोस् । यसले पेटको फ्याट घटाउँछ ।
९. ग्रीन टीः
ग्रीन टीमा पर्याप्त मात्रामा थायनाइन नामक एमिनो एसिड हुन्छ यो एसिडले भोकलाई नियन्त्रण गर्दछ । यसले पेटको बोसो कम हुन्छ ।
नियमित रुपमा एक ग्लास मनतातो पानीमा एक चम्चा मह मिसाएर पिउनुहोस् । यसले तपाईंको बोसो निकै छिटो समयमा घटाउन मद्दत गर्दछ ।
११. मर्निङ वकः
नियमित रुपमा २ देखि ३ किलोमिटर मर्निङ वकमा जानुहोस् यसले क्यालोरी बर्न गर्न सहयोग गर्नेछ र बोसो घटाउनलाई सहयोग गर्दछ ।
१२. सोडा खाने बानीलाई त्याग्नुहोस्ः
कार्बोनेटेड पेय पदार्थले तपाईंको पेट बढाउने भन्दा केही फाइदा पुर्याउँदैन । त्यसकारण आफ्नो यस्तो बानी छ भने आजदेखि नै छोड्नुहोस् । यसको सट्टा पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनुहोस् ।
किन बढ्छ अचानक मुटुको चाल ? हुनसक्छ यस्तो संकेत
आज थपिएका ८३० संक्रमित कुन जिल्लामा कति ?
अण्डा उसिनेकाे पानी बिर्सिएर पनि खेर फाल्ने नगर्नुहाेस्, यस्ता छन् यसका फाइदै-फाईदा ! पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं
‘प्रेसर लो’ भएको महशुस गर्नुभयो ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्